Golaha Ammaanka ee QM oo looga hadlay dedaallada dhaliyarada Soomaalyeed dhinaca Nabadda. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Golaha Ammaanka ee QM oo looga hadlay dedaallada dhaliyarada Soomaalyeed dhinaca Nabadda.
Golaha Ammaanka ee QM oo looga hadlay dedaallada dhaliyarada Soomaalyeed dhinaca Nabadda.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ugu baaqay bulshadiisa in ay canshuur bixiyaan si dib loogu celiyo adeeg wanaagsan.
Next articleMadaxwene Farmaajo oo furay shirkii DF iyo Dowlad gobolleedyada (sawirro)